Dhuusamareeb: Lamaaha amaanka oo soo rogay amarro culus – Hornafrik Media Network
Laamaha amaanka magaalada Dhuusamareeb ee hoos taga dowladda federaalka ayaa soo saaray amar ka dhan ah shirar aan ogolaansha looga heysan ee lagu qabto hoteelada magaalada.
Amarkaan oo sida la sheegay ka soo baxay saraakiisha ciidamada dowladda ayaa milkiilayaasha hoteelada ku yaalla magaalada Dhuusamareeb waxaa lagu amray inaysan ogolaan in hoteeladooda lagu qabto shir aan ogolaansho looga heysan iyaga.
Hoggaanka sare ee Ahlu-Sunna ayey haatan kulamo uga socdaan magaalada Dhuusamareeb, kuwaas oo ay uga baaraan dagayaan go’aankii ay ka qaadan lahaayeen talaabadii maalin ka hor uu ku dhaqaaqay guddiga farsamada maamul dhisidda Galmudug.
Sidoo kale waxaa jira siyaasiyiin kale oo reer Galmudug ah, kuwaas oo iyaguna Dhuusamareeb ka wada kulamo ay uga arinsanayaan hanaankii ay saamayn ugu yeela la haayeen maamulka cusub ee loo dhisayo Galmudug.
Sidoo kale wararkii ugu dambeeyey ee Dhuusamaereeb ayaa sheegaya in ciidamada dowladda eek u sugan Dhuusamareeb ay goobo hor leh oo ka tirsan magaalada ay fariisimo cusub ka sameysteen.
Cudurro halis ah oo ka dilaacay Ceelwaaq